बिदेशमा कमाएको पैसा केटिले खा’इदिईन, काकालाई देखेपछि दाउरो टि’पेर हिँडेका लोकबहादुरले के-के गरे ? - Nepali in Australia
September 12, 2021 September 12, 2021 autherLeaveaComment on बिदेशमा कमाएको पैसा केटिले खा’इदिईन, काकालाई देखेपछि दाउरो टि’पेर हिँडेका लोकबहादुरले के-के गरे ?
संखुवासभा मादी नगरपालिका-१ उम्लिङमा गत सोमबार एकै परिवारका ६ जनाको ह’त्या’पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा, संघीय प्रहरी इकाई धरान र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली पुगेको थियो।
प्रहरी टोली घ`टनास्थलमा खटिँदा २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्की घरमै थिए। उनी ह’त्या गरिएका ५७ वर्षीय तेजबहादुर कार्कीका बढावाका नाति थिए, नातामा भतिजा। लोकबहादुर घरका जेठा छोरा थिए। आमा गत चैतमा बितेकी थिइन्। उनी ह’त्या अनुसन्धानमा प्रहरी खटिएका बखत त्यतै देखिन्थे, पत्रकार तथा स्थानीयसँग घ’टनाबारे कुराकानी पनि गर्थे।
झट्ट हेर्दा ‘सामान्य’ लाग्ने उनले कसरी यतिधेरै मानिसको ह’त्या गर्लान्? सुरूमा त प्रहरी नै अ’न्योलमा थियो। प्रहरीले मृ`तक परिवारसँग कसैको केही ‘रि’सरा’ग’ थियो कि भनेर खोजी गर्‍यो, तर केही पनि फेला पार्न सकेन। जिल्ला नै ‘सिल’ गर्दा पनि शं’कास्पद मानिस भेटिएन।
त्यसपछि प्रहरीले घटना भएको क्षेत्र वरिपरिलाई नै आधार बनाएर अनुसन्धान गर्न थालेको थियो। सोधपुछ गर्दा भने उनी ‘अ’नकनाएर’ बोल्थे। यसकारण प्रहरीले उनलाई ‘नि’गरानी’मा राखेको थियो। प्रहरीले घर छोडेर बाहिर निस्किन उनलाई रो’क लगाइएको थियो।
लुगा भेटिएपछि उनीसँग प्रहरीले बयान लिन थालेको थियो। शुक्रबार राति भने नियन्त्रणमै लिएको थियो। बयान लिँदा उनले ह’त्या गरेको स्वीकार गरेको अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले जनाएको छ। ‘उनले ह’त्या स्वीकार गरिसकेको हुँदा नियन्त्रणमा लिएर राखिएको छ,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीले भने, ‘बाँकी कुरा भोलि मात्रै सार्वजनिक गर्छौं।’
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार सोमबार उज्यालो भइसकेको थियो, साढे ५ देखि ६ बजेको समय। यकिन गरिनसकिएको यो समयमा लोकबहादुर आँगनमा निस्केका थिए। उनका बुवा र भाइ घाँस का’ट्न बिहानै बारीतिर निस्केका थिए। घरमा एक्लै रहेका बेला उनले तेजबहादुर उकालो लागिरहेको देखेका थिए।
तेजबहादुर खेताला खोज्न भन्दै घरबाट निस्केका थिए। तेजबहादुर र लोकबहादुरको घर डेढ सय मिटरमा दुरीमा पर्छ। तेजबहादुरलाई दे’ख्नेवित्तिकै ‘झों’क’ चलेको लोकबहादुरले प्रहरीलाई बताएका छन्। तेजबहादुरले आफूलाई पहिला गा’लीग’लौज गरेको लोकबहादुर सम्झिएको बताएका छन्।
त्यसपछि आँगनबाट दाउरो टि’पेर उनी तेजबहादुरलाई हिiर्काउन अगाडि बढेको बताएका छन्। डि’ल उक्लिँदै गरेका तेजबहादुरलाई पछाडिबाट टाउकोमा प्र’हार गरेको बताएका छन्। यसरी प्रहार गर्दा तेजबहादुर ढ’लेपछि उनकी श्रीमती क’राउँदै आएकी थिइन्।
‘ए यो लोकेले मा’र्‍यो भन्दै आउँदा उनलाई पनि हि’र्काएको बताएका छन्,’ वडाध्यक्ष खेमनाथ कटुवालले भने। प्रहरीले लोकबहादुरसँग बयान लिँदा कटुवाल आफू सँगै रहेको बताउँछन्। सासु ढ’लेको देखेपछि बुहारी अगाडि बढ्दा उनलाई पनि हि’र्काएको लोकबहादुरले बताएका छन्।
‘दुई नातिनातिना दौ’डादौड गर्दैगर्दा उनीहरूलाई ले’खेटी-ल’खेटी दाउराले हि’र्काएको बताएका छन्,’ कटुवाल भन्छन्, ‘कसलाई कतिपटक हि’र्काएको उनलाई पत्तो पाइनँ भन्छन्।’ त्यसपछि उनले घरै पुगेर कुँडो पकाउन आगो फु’किरहेकी ८४ वर्षीया आमा पार्वतालाई हि’र्काएका थिए।
कुँ’डो पकाएको ठाउँमै पार्वताको श’व फेला परेको थियो। पार्वतालाई न्याकेर पहिले उनको टाउको भित्तामा दुई पटक ठो’क्काएको र त्यसपछि दाउराले हि’र्काएको लोकबहादुरले बताएका छन्। ‘तेजबहादुरलाई मात्रै हिर्काउन खोजेको भए पनि परिवारका अरु सदस्यले देखेर आफूतिर आएपछि ल’खेट्दै हि’र्काएको उनले बताएका छन्,’ वडाअध्यक्ष कटुवाल भन्छन्।
आफूलाई ‘हो’च्याएर’ बोल्ने गरेकाले तेजबहादुरसँग ‘रि’स’ उठेको लोकबहादुरले बताएको कटुवालले जनाए। ‘घ’टनामा प्रयोग भएको दाउरो चाहिँ बा’लिसकेको बताएका छन्,’ वडाध्यक्ष कटुवालले भने। घटना ‘आ’वेग’मा भएको देखिए पनि यसबाहेक अन्य कारण के थिए भन्ने प्रहरीले बताउन मानेको छैन।
अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार घटना लोकबहादुर किसान गर्ने मानिस हुन्। उनी मलेसियामा बसेर तीन वर्षअघि फर्किएका थिए। मलेसियामा रहँदा मा’नसिक स्थिति बि’ग्रिएपछि नेपाल फर्केको कटुवाल बताउँछन्। अहिले ‘ठिकै’ भनिएका लोकबहादुर गाउँमै खेतीपाती गरेर बसिरहेका थिए।
लोकबहादुर दुईपटक बहुला भएका थिए । उनले करिब एक वर्ष अगाडिसम्म मा’नसि’क रो’गको औ’ष’धि से’वन गरिरहेका थिए । ‘केटीले धो’का दिएपछि लोक बहादुर दुई पटक ब’हुलाएर हिँडेको थियो । विदेश गएका बेला कुन केटीलाई पैसा पठाउँदो रहेछ ।
पछि नेपाल फर्किँदा केटी सम्पर्कविहीन भएपछि बहुलाएको हो,’ मृ’तकका भतिजा विनोद कार्कीले भने, ‘पछि आफैँ ठिक भएको सुनेको थिएँ । लामो समयदेखि ठिकै थियो । पछि आमाको ह’त्या’को कारण तेजबहादुर हो भन्दै आ’क्रो’श व्यक्त गरिरहन्थ्यो ।’ भिडियो: